Madaxweyne Macron “Daacish weli waa khatar taagan, yaanan lees dhigan” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Macron “Daacish weli waa khatar taagan, yaanan lees dhigan”
Madaxweyne Macron “Daacish weli waa khatar taagan, yaanan lees dhigan”
Madaxweyne Macron oo ka barbar hadlayay Ra’iisal Wasaaraha Ciraaq, Mustafa al-Kadhimi ayaa tilmaamay in Faransiiska iyo bahwadaagtiisa ay garab taagan yihiin Xukuumadda Baqdaad, oo dagaal kula jirta kooxaha argagixisada.
“Waxaan dhammaan ognahay sida ay muhiimka u tahay inaan sii xoojino feejignaantayna, waayo Daacish weli waa khatar taagan. Waxaan ognahay in Dowladda Ciraaq ay weli muhiimadda 1aad siinayso la dagaalanka kooxaha argagixisada. Waxaan kuu xaqiijinayaa in Faransiiska iyo xulafadiisa kale ay garab taagan yihiin Ciraaq.” Ayuu yiri Madaxweyne Macron.
Previous articleHawlgalka daad-gureynta ee Garoonka Kabul oo geba-gabo ku dhow
Next articleDad careysan oo dab qabadsiiyay Xarunta Hay’adda Bisha Cas ee Baardheere